Guineana roalahy : Nahatrarana « cocaïne » sy « héroïne » -
AccueilSongandinaGuineana roalahy : Nahatrarana « cocaïne » sy « héroïne »
Guineana roalahy : Nahatrarana « cocaïne » sy « héroïne »
Nokasaina haparitaka eto an-drenivohitra. Sarona niaraka tamin’ny vovon-drongony mahery vaika milanja 155 girama i Diallo Mohamed Laine sy Camara Ibrahim, teratany Guineana nipetraka an-taonany teto an-drenivohitra. Ny talata lasa teo izy roalahy no nosamborin’ny teo anivon’ny “Service de la Surveillance du Territoire” teny amin’ny trano nitoerany teny 67ha.
Araka izany, tsy mitsahatra ny harenesam-baovao ny fandotoana ataon’ny teratany vahiny. Naharay vaovao ireo mpitandro filaminana, fa misy teratany vahiny indray mikasa hivarotra sy hanaparitaka ireo zava-mahadomelina ireo eto an-drenivohitra. Saika ireo teratany vahiny avokoa no manao io sera maloto io, ary ity indray ny manaraka. Mpamatsy sy mpivarotra rongony mahery vaika “cocaïne sy héroïne” no efa anton-draharahan’ireto farany eto Antananarivo. Efa nigadra tamin’io asa ratsy io ihany koa ny iray tamin’ireo rehefa nanaovana fanadihadiana. Ny iray hafa indray dia tsy manana akory ny taratasy fahazoan-dalana hipetraka eto Madagasikara, raha ny angom-baovao avy eo anivon’ny polisy nisahana ny raharaha. Talohan’ny nisamborana azy ireo, akom-baovao no nahalalana fa nahatafiditra an-tsokosoko ireo zava-mahadomelina mahery vaika ireo ireto teratany Guineana, ary teny amin’ny faritra 67ha no nitoerany.
Nidina mivantana teny an-toerana ny mpitandro filaminana vao naharay fampandrenesana, ka nanara-dia azy ireo. Noraisim-potsiny tao amin’ny trano fonenany ireo teratany vahiny ireo, ary nanaovana fisavana avy hatrany. Tamin’ny alalan’izany no nahasarona ny fonosana “héroine” nilanja 43grama sy ny “cocaïne” 112grama. Natolotra ny polisy misahana ady amin’ny zava-mahadomelina ny tohin’ny famotorana, ary hatolotra ny fampanoavana ny raharaha aorian’izay.
Sera efa mahazo vahana tanteraka izy ity, ary mbola tsy misy fitsaharany. Ireo teratany vahiny toa ny Afrikanina, Maorisianina ary misy miray tendro amin’ny Malagasy no efa rava teto avokoa. Ny mahagaga anefa tsy misy tohiny mihitsy ny mahakasika azy ireny, izay miainga amin’ny famotorana, sy ny fanasaziana miandry. Raha ity hita ity mantsy dia efa mpamerin-keloka ilay lehilahy iray tamin’ireo teratany Guineanina voasambotra. Izany hoe maivana tanteraka ny sazy miandry azy ireo eny anivon’ny fitsarana eto an-toerana raha ny toe-javatra hita. Aiza ho aiza izany ny fetran’ny fanasaziana tokony hihatra amin’ny teratany vahiny amin’ity trafikana rongony ity eto amintsika. Manoloana izany, tsy mba fantatr’ireo mpitandro filaminana misahana ny raharaha ihany koa ve mandritry ny fakana am-bavany ny niavian’ireo vovon-drongony maro efa tratra teto sy izay tena mpamatsy azy ity. Ny hany fantatra hatreto dia mitady ho gaboraraka ny fanaraha-maso.